Al-Shabaabkii ugu badnaa oo la wareegay deegaan katirsan Gobolka Sanaag – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay inay la wareegeen degaanka Gacan-Maroodi oo hoostaga degmada Yubbe ee gobolka Sanaag,halkaas oo ay horay ugu sugnaayeen maleeshiyaad dadka deegaanka ah.
Dagaalamayaasha Shabaab oo la sheegay inay gaarayaan 70 Askari ayaa waxaa ay gudaha u galeen degaanka Gacan-Maroodi ee gobolka Sanaag,halkaas oo ay horay ugu sugnaayeen Maleeshiyo beeleed ka amar qaata Soomaaliland.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Xubnaha katirsan Al-Shabaab ay sidoo kale u dhawaadeen degmada Yubbe ee isla gobolka Sanaag,waxaana xubnaha Shabaab ee qabsaday degaanka Gacan-Maroodi ay kazoo galeen deegaanka dhinaca buuraleyda Calmadow ee gobolkaasi Sanaag.
Wararkii ugu dambeeyey ee Gobolka Sanaag kazoo gaaraya Shabakadda Wararka Mareeg.com ayaa waxaa ay sheegayan in Ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland ee ku sugan qeybo kamid ah Gobolkaasi heegan buuxa la geliyey.